हिमाल खबरपत्रिका | म चाहिं भाषाविद् होइन
सजिलैसित ‘विद्’ बनाउने/बन्ने चलनले समाजको प्राज्ञिक स्तर र विशेषज्ञताको गुणवत्तामा नराम्रो असर परिरहेको र टपर्टुइँय्यापनको साम्राज्य फैलिइरहेको छ।
मलाई हिजोआज आदर गर्नेले र यदाकदा गाली गर्नेले पनि भाषाविद् भनिदिन्छन्, दिक्क लाग्छ । म जस्ता अरू कतिलाई अरूले यत्तिकै ‘विद्’ बनाइदिएका होलान् ! यो सजिलो ‘विद्मय’ परिवेशमा कति हैसियत नै नपुग्ने विषयमा ‘विद्’ भएको दाबी गरेर बसेका होलान् ।
मेरो विचारमा त कुनै विषयको गहन अध्ययन, अनुसन्धान, चिन्तन, मनन गरेका र आफूले जानेका कुरा अरूको चित्त बुझएर प्रस्तुत गर्न सक्ने मान्छे मात्र ‘विद्’ हुन् । ‘विद्’ कहलाइन गम्भीरतापूर्वक पढेका र लेखेका (थेसिस किनेर वा खेताला लगाएर प्रमाणपत्र हात पारेकाहरू होइन) र सकभर विश्वविद्यालयको डिग्री हासिल गरेका व्यक्ति हुनुपर्छ । प्राज्ञिक प्रकाशनहरूमा विधिवत लेखलेखादि प्रकाशित गरेका, विषयलाई चारैतिरबाट केलाएर हेर्न सक्ने, अन्यथा प्रमाणित भए आफ्नै मान्यता पनि छाड्न सक्ने व्यक्तिलाई मात्र विद् भन्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा स्वाध्यायनबाट नै कुनै विषयमा गहिरो ज्ञान हासिल गरेका पनि ‘विद्’ हुनसक्छन्, तर त्यस्ता व्यक्ति ज्यादै कम हुन्छन् । किनभने ज्ञान आर्जनको एक्लो यात्रा अझ् दुरुह हुन्छ ।
सबभन्दा धेरै विद्हरू जन्माउने काम पत्रकारहरूले गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई विद्भन्दा तलका मान्छेको ‘कोट’ मा वजन नै नभए जस्तो लाग्छ कि के हो, जोसित कुरा गर्‍यो, त्यही विद् । जानकार, अध्येता, अनुसन्धाता आदि किन भनिरहनु ? सीधै विद् भन्दियो, पगरी पाउने खुशी हुन्छ, आपत्ति गर्ने कोही हुँदैन । तर बुझनुपर्ने कुरा हो, आफ्नो कार्यक्रममा आएर बोल्ने मान्छे नपाएका रेडियो वा टेलिभिजन पत्रकारले अनुत्तरदायी ढङ्गले पगरी गुताइदिएका भरमा विद् भइँदैन । एक पटक मुलुकमा कति थिए द्वन्द्वविद्हरू, कति थिए संविधानविद्हरू ? अहिले तिनीहरू के विद्मा फेरिएका होलान् ? के विद्वत्ताको क्षेत्र कन्सल्टेन्सी जसरी सजिलै फेरिन सक्छ ?
कसैले नजानेर, कसैले जानाजान, कसैले के भनूँ के भनूँ भनेर दिएका विद्को पगरी लगाउने हैसियत पुग्छ कि पुग्दैन, आफैंले विचार गर्नुपर्छ र त्यो पगरी आफैं खोल्नु पनि पर्छ । “मैले होइन, अरूले भनेको त हो नि” भनेर चूप लाग्यौं भने समाजलाई ढाँट्ने काममा हामी आफैं सहभागी भइरहेका हुन्छौं । त्यस्तो उल्फाको पगरी फुकालेर आफ्नै टोपी लगाउन सजिलै सकिन्छ पनि । मलाई नै कतिले बोलाउँछन्, “अब आउँदै हुनुहुन्छ भाषाविद्, वरिष्ठ पत्रकार ...” त्यसरी बोलाइदा म भन्छु, “उद्घोषकले मलाई भाषाविद् र वरिष्ठ पत्रकार भने पनि म भाषाविद् होइन । वरिष्ठ पत्रकार पनि होइन । म सामान्य लेखक–सम्पादक मात्र हुँ । बेलाबेला भाषासित सम्बन्धित अभियानहरूमा पनि सामेल हुन्छु, त्यति हो ।”
पत्रकार भनिनका लागि चाहिने जाँगर, अध्यवसाय, सम्पर्क, सूचनाप्रतिको चनाखोपन मैले राखेको छैन । नियमित रूपमा समाजलाई सूचित गर्ने काममा बलियो गरी संलग्न पनि छैन । लहड चलेको वा कर लागेका बेला गरेको कामले पत्रकारिताको जिम्मेवारी बोक्न सक्दैन । अझ् भाषाविद् हुन त सबभन्दा पहिले भाषाशास्त्र पढेको हुनुपर्छ । शास्त्र पढेर पनि शास्त्री मात्र भइन्छ । विद् हुनका लागि त्यसपछि पनि लामो बाटो हिंड्नुपर्छ । मैले न भाषाशास्त्र पढेको छु न त त्यो बाटोमा आफ्नै सुरले हिंडेको छु । अनि कसरी भाषाविद् !
यसको अर्थ मैले केही गरेको छैन भन्ने होइन । मैले निकै काम गरेको छु र तिनमा गर्व पनि गर्छु । मैले धेरैलाई नेपाली युनिकोड चलाउन सिकाएको छु । आफ्नो भाषामा लेखपढ गर्ने सीपबाट हुने फाइदाबाट हाम्रो समाज वञ्चित नहोस् भन्ने उद्देश्यले म त्यसमा लागेको हुँ । नेपाली टाइप गर्नका अल्छीले सामाजिक सञ्जालमा रोमनमा नेपाली लेख्नेहरूलाई सल्लाह दिएको छु, सिकाएको छु, व्यङ्ग्य गरेको छु र कहिलेकाहीं त हप्काएको समेत छु । त्यो ‘एक्टिभिजम’ हो ।